Dawladda Mareykanka Oo Dhalashada Kala Noqotay Wadaad Soomaali Ah Oo Hargeysa Yimid + [ Sababta | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dawladda Mareykanka Oo Dhalashada Kala Noqotay Wadaad Soomaali Ah Oo Hargeysa Yimid...
Dawladda Mareykanka Oo Dhalashada Kala Noqotay Wadaad Soomaali Ah Oo Hargeysa Yimid + [ Sababta
Mareykanka ayaa dhalashada kala noqday IImaamka masaajidka ugu weyn magaalada Portland , ka dib markii uu toddobaadkii hore gaadhay Somaliland .
Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye , ayaa ku jiray liiska dadka aan loo ogolayn in ka dhoofaan Mareykanka , waxaana loo haystay in uu been u sheegay waaxda socdaalka 1997 markii uu dalbanayey jinsiyada Mareykanka .
Kaariye oo 57 jir ah, ayaa Arbacadii ka dhoofay garoonka diyaaradaha Seattle , waxaana uu ku sii hakanayay magaalada Dubai ka dib duulimaad 14 saac ahaa, isaga oo uga sii gudbayey Somaliland .
Markii uu gaadhay Dubai , waxa uu garyaqaankiisa u sheegay in ay wax khaldan yihiin.
Kaariye, ayaa la xidhay waxaana baadhitaan lagu sameeyay wax lagaga weydiiyey , masaajidka As Sabeer ee ku yaalla Koonfur Galbeed Portland iyo dadka ku cibaadaysan jiray , sida ay sheegeen garqayaanadiisa Philip Smith iyo Nicole Nelson loomana ogolaan in uu la xidhiidha xeer-illaalinta intii su’aalaha la weydiinayay ,iyada oo lagala wareegay alaabtii uu sitay dhammaan .
Bishii October garyaqaanada dawladda federal-ka ayaa u sheegay maxkmada racfaanka in Kaariye lagu darey liiska dadka aan dhoofi karin ,iyada oo lagu saleeyay taariikhdiisa in uu ahaa dagaaliyahan ka mid ahaa mujaahidiintii Afghanistan kula dagaalamay Ruushka iyo in uu taageero u muujiyey jihaadka rabshadaha wata . Waxa jira wada sheekaysi la duubay oo dhex marey basaasiin iyo laba xubnood ka tirsan dadka Portland seven .
Koox ka mida Muslimiinta Mareykanka oo ka soo jeeda deegaanka la deriska Portlan, ayaa dacwado lagu soo oogay , waxaana lagu helay in ay isku dayeen ay ku biiraan Al-qaaciida si ay ula dagaalamaan ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda ku sugan Afghanistan .
FBI-da ayaa waaxda cadaaladda ku wargelisay in uu Kaariye la soo shaqeeyey Cusaama Bin Laadin iyo hogaamiyayaal la yaqaan oo argagixiso ah , waxaana uu xidhiidh saaxiibtimo la lahaa ururo argagixiso oo uu ka mid yahay Makhtab Al-khitmat .
Dhinacyada ayaa isla meel dhigay in jinsiyada lagala laabto , taasoo ogolaanaysay in Kaariye ka dhoofo Mareykanka sida uu sheegay Kevin Sonoff oo ah af-hayeenka xeer-illaalinta iyo waaxda cadaaladda Mareykanka .
Kaariye, ayaa awoodayey in uu dhoofo magaalada Hargeysa ee Somaliland oo uu Jimcihii gaadhey
Previous articleBerberaShil baabuur oo 7 doba qof ku dhinteen jidka u dhexeeya berbera iyo hargaysa
Next articleGaaski ugu badnaa abid oo laga helay Deegaanka Soomaalida Itoobiya